Wararka - 20-ka farshaxan ee magaalada midkee baa hal abuur badan?
20ka farshaxan ee magaalo keebaa hal abuur badan?
Magaalo kastaa waxay leedahay farshaxan u gaar ah oo dadweyne, iyo farshaxanno magaalo ku yaal dhismayaal camiran, caws madhan iyo jardiinooyin waddooyin ah, waxay ku siinayaan muuqaalka magaalooyinka habeyn iyo isu dheelitirnaan dad badan. Ma ogtahay taas kuwan 20 farshaxanno magaalo ayaa laga yaabaa inay faa'iido leeyihiin haddii aad ururiso mustaqbalka.
The farshaxanno ee “ Awoodda Dabeecadda ”Gudaha magaalooyinka waaweyn ee adduunka waa la naqshadeeyay waxaa qoray Lorenzo Quinn oo ah fanaan Talyaani ah. Quinn waxaa ku dhiirrigeliyay burburinta bay'adda dhulka duufaanka ka dib, waxayna samaysay naxaas, bir bir ah iyo aluminium farshaxanno ku jira “ Awoodda Dabeecadda “ taxane ah . Kani waa "Awoodda Dabeecadda" ee London.
Farshaxamiistaha Faransiiska ah Bruno Catalano ayaa ka abuuray Les Voyageurs (Les Voyageurs) Marseilles, France. Farshaxanku wuxuu qarinayaa qaybo muhiim ah oo ka mid ah jidhka bini-aadamka, waxaana la dareemayaa inay hadda soo mareen tunnel-ka waqtiga, qaybta maqanna waxay kicineysaa dadka oo keliya Xusuusnow in qof kasta oo socotada ahi si lama huraan ah uga tago qol ballaadhan oo mala awaal ah markuu gurigiisa ka baxo. Miyayna seegtay qaybta farshaxanku qalbiga dayacay ee dadka casriga ah?
Taallada Kafka ee uu naqshadeeyay farshaxanistaha reer Czech Jaroslav Róna waxay ku saleysan tahay muuqaal ka mid ah buuggii ugu horreeyay ee Kafka ee "America" ​​(1927). Isu soo bax, musharax siyaasadeed wuxuu ku socdaa garbaha qof weyn. Sannadkii 2003 farshaxankii ayaa lagu dhammaystiray Dusny Street ee Prague.
Intabadan Louise Bourgeois (1911-2010) shaqooyinkeedu waxay keenaan masayr, xanaaq, cabsi iyo caruurnimadeeda xanuunka leh ee indhaha dadweynaha iyadoo loo marayo shaqooyin. "Maman" (Spider) ka hor madxafka Guggenheim ee Bilbao, Spain. Caara-cadaan dhererkeedu yahay 30-cagood waxay astaan ​​u tahay hooyadeed. Waxay aaminsan tahay in hooyadeed caqli badan tahay, dulqaad badan tahay oo nadiif tahay sida caarada oo kale.
Albaabka daruurta oo uu naqshadeeyay farshaxamiistaha reer Britain ee Anish Kapoor waa farshaxan 110-tan ah oo oval ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'boodh', oo ku yaal Chicago Millennium Park. Waxyoonay ku leh dareeraha meerkuriga, farshaxanku waa dherer dhererkiisu yahay 66 cagood iyo 33 fuudh oo dherer ah Waa farshaxan caan ku ah magaalada Chicago.
Sannadkii 2005, daanta bari ee Danube ee Budapest, agaasimaha filimka Can Togay iyo farshaxan-yahan Gyula Pauer waxay sameeyeen "Kabaha Danube" si loogu xuso xasuuqii boqolaal Yuhuudda Hangari ah laga soo bilaabo 1944 ilaa 1945. Xasuuqii ka hor, Yuhuuddu waxay kabihii saareen wabiga qarkiisa, laakiin rasaasta ka dib, meydka waxaa si toos ah loogu beeray Danube.
Sawirka Nelson Mandela waa la wada ogyahay. Sawir gacmeedka u dhow Howick ee Koonfur Afrika waxaa sameeyay farshaxanka reer Koonfur Afrika Marco Cianfanelli.
Farshaxanka dharka loo yaqaan'pinpinpin 'oo uu naqshadeeyay farshaxan-yahanka reer Sweden ee Klas Oldenburg wuxuu ku yaal meel u dhow Xarunta Dawladda Hoose ee Philadelphia.
"Digital Dougca" (Dijital Dougca) waa qurux ama la yaab, dhammaantood waxay ku yaalliin Vancouver iyadoo laga fiirinayo dekedda iyo buuraha Cypress Park. Sawir gacmeedkani wuxuu ka kooban yahay alwaax bir ah, aluminium xirashada iyo xabadaha madow iyo caddaan, taasoo ka dhigeysa meel ku habboon dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka inay sawirro ka soo qaadaan.
Ubaxa buufinka (casaanka) waxaa la dhigay Xarunta Ganacsiga Adduunka ee cusub ee Magaalada New York.
Sawirka naxaasta ah ee fardaha duurjoogta ah ee Las Vegas, oo uu abuuray Robert Glenn, ayaa muujinaya muuqaalka sagaal faras duurjoog ah oo ku dhex socda biyaha.
Sawirka hore ee Maktabada Qaranka ee Melbourne, Australia, macnaheedu waa hoos u dhaca ilbaxnimada isla mar ahaantaana wuxuu muujinayaa gaabnaanta xaqiiqda.
“Qoriga la ruxay” wuxuu ku ag yaal Xarunta Dhexe ee Qaramada Midoobay ee magaalada New York. Sawir gacmeedkani wuxuu u taagan yahay rajo adduun aan rabshad lahayn.
Rakibaadda madaxa birta ah waxay ku taal Prague waana mid ka mid ah shaqooyinka David Sini. Farqiga u dhexeeya farshaxankan ayaa ah inuu isku shaandheyn karo dhammaan lakabyada birta ah ee birta ah oo ah 360 digrii iyadoo loo marayo internetka, oo marka la is waafajiyo mararka qaarkood, madax weyn la abuuri karo. Shaqadu waa isdhexgalka farshaxanka ee xakamaynta farsamada iyo farsamada kombiyuutarka farshaxanka.
Fikir noocee ah ayuu sawirkan dhererkiisu yahay labaatan cagood ee Philadelphia ku muujinayaa farshaxanka? Ka takhalus dhammaan caqabadaha, waa inaan…
Farshaxanku wuxuu ku yaal banaanka Matxafka Xarunta Pompidou ee Farshaxanka Casriga ah. Naqshadeeyay farshaxanka Faransiiska Cesar Baldaccini, wuxuu xambaarsan yahay mid ka mid ah mawduucyada uu jecel yahay, matalaadda khiyaaliga ah ee aadanaha, xayawaanka iyo cayayaanka.
Waxaa naqshadeeyay farshaxamiistaha reer Hungary Ervin Loránth Hervé, cawska weyn ayaa kor loo qaaday oo sawiro waa weyn ayaa u muuqda inay dhulka ka soo kacayaan Farshaxanku wuxuu ku yaal banaanka Suuqa Farshaxanka ee Budapest.
Riyada Alberta waa farshaxan farshaxan ah oo reer Spain ah Jaume Plensa. Shaqadu waa mid heer sare ah oo siyaasadeed, dad badana waxay umuuqdaan inay ku kala aragti duwanyihiin macnaheeda dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, tani waa tan ka dhigaysa farshaxanka Plensa mid gaar ah, maxaa yeelay waxay dhiirrigelisaa xiriir aan horay u jirin.
Shaqada sawirqaade reer Singapore Chong Fah Cheong (magaca Shiinaha: Zhang Huachang). Sawir gacmeedku wuxuu muujinayaa daqiiqad ay koox wiilal ahi u boodaan Webiga Singapore. Kooxdan sawir gacmeedyada waxay ku yaalliin Buundada Cavenagh, oo aan ka fogeyn Hotelka Fullerton.
“Spoon and Cherries” oo ku dhex yaal Beerta Dhismaha Beerta Minneapolis waa naqshad qurux badan oo dheel dheel ah oo ku dhex taal beerta, sidoo kale si xikmadaysan ayay uga muuqataa labada daraf ee geedaha cherry madow. Sawirqaadaha wuxuu siiyay shaqo buufin biyo ah si uu jeeriga marwalba u yeesho saameyn qurux badan.